၁၃ ကြိမ်မြောက် American Got Talent ပြိုင်ပွဲရဲ့ Winner မျက်လှည့်ပညာရှင် Shin Lim – SoShwe
Home/Entertainment/၁၃ ကြိမ်မြောက် American Got Talent ပြိုင်ပွဲရဲ့ Winner မျက်လှည့်ပညာရှင် Shin Lim
AMERICA'S GOT TALENT: THE CHAMPIONS -- Season:1 -- Pictured: Shin Lim -- (Photo by: Vivian Zink/NBC)
၁၃ ကြိမ်မြောက် American Got Talent ပြိုင်ပွဲရဲ့ Winner မျက်လှည့်ပညာရှင် Shin Lim
အသက် ၂၇နှစ်အရွယ် Shin Lim က American Got Talent ပြိုင်ပွဲမှာ အတော်ဆုံးမျက်လှည့်ပညာရှင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ သူဟာ American Got Talent ပြိုင်ပွဲရဲ့ဆုရှင်အဖြစ် နာမည်တွင်နေတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ “ဒါဟာ လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ အိမ်မက်တစ်ခုဟာ လက်ရှိမှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာသလိုပါပဲ။ တကယ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတယ်။”လို့ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် ထိပ်တန်း၅ယောက်ဖြစ်တဲ့ Preacher Lawson က ပဉ္စမနေရာ၊ Cristina Ramos က စတုတ္ထနေရာ၊ Kseniya Simonova က တတိယနေရာ၊ Darci Lynne Farmer က ဒုတိယနေရာတို့ကို အသီးသီး ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Shin Lim က “လက်ရွေးစင်တွေရဲ့ဖျော်ဖြေမှုကလည်း တကယ့်ကို အံ့မခန်းပါပဲဗျာ။ တချို့တွေရဲ့ဖျော်ဖြေမှုက ကျွန်တော့်မျက်လှည့်ထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကမှ ဘာလို့ winner ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကို ခုချိန်ထိကို ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူးဗျာ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီပြိုင်ပွဲကြီး အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သွားတော့ တကယ်ကိုစိတ်ပေါ့သွားတာပဲ။” လို့ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ် မယုံနိုင်သေးကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lim က “အတော်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာလည်း တစ်ဦးထက်တစ်ဦးပိုသာအောင် ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပဲ။ ဒီထဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရတာကိုက တကယ်ကိုဂုဏ်ယူစရာပါ။” လို့လည်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက သူဟာ ၁၃ ကြိမ်မြောက် American Got Talent ပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် စိတ်မကူးထားခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ချစ်သူ Casey က ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာကြောင့် ဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။
Today is dedicated to you @caseykathleen_ ♥️ nothing can describe my happiness when I’m with you, Happy Valentine’s Day 😘
Casey ဟာ သူမရဲ့ချစ်သူ မျက်လှည့်ပညာရှင်လေးကို ပြိုင်ပွဲတောက်လျှောက် အနောက်ကနေ လိုရာဖြည့်ဆည်းပေးရင်း အားပေးကူညီခဲ့တာမို့ Casey ကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း Lim က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Lim ဟာ Casey နဲ့ သြဂုတ်လမှာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့အတွက် အစီအစဉ်တွေလုပ်နေပြီလို့လည်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ Lim ဟာ သူ့ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်မျက်လှည့်ပြပွဲတွေ ကျင်းပဖို့အတွက် အပြင်းအထန်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာကို People မဂ္ဂဇင်းက ပြုလုပ်တဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေခဲ့ပါတယ်။
Previous အသက်၁၆နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားနဲ့ ပြဇာတ်ခန်းမထဲမှာ အတူနေမိတဲ့အတွက် သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုဖြင့် တရားစွဲခံရတဲ့ ဆရာမ။
Next ??????????????????????? Rap ???????? 21 Savage